WARIYE IYO SARKAAL GOLAHA DHEXE EE KULMIYE AH OO MAANTA CIIDAMADA BOOLSIKA HARGEYSA XIDHEEN | Toggaherer's Weblog
WAFTIGII LABADA GUDOOMIYE FAYSAL IYO CIRO OO GAADHAY STOCKHOLM(SEWDEN)
Hargeysa 16 Feb 2009 ToggaHerer
Wariye Maxamed Cismaan (Sayid) oo ka tirsan idaacada madaxa banaan ee Radio Horyaal iyo Mudane Cabdikarim Baande oo ka tirsan golaha dhexe ee Xisbiga Mucaaridka ah ee KULMIYE ayaa maanta duhurkii ay ciidanka booliska ee Magaalada Hargeysa Xabsiga u taaxaabeen.
Labadan xubnoo la kala qabtay laba xili oo kala duwan ayaa waxaa la xaqiijiyey qabashada labadaa masuul in ay amar ku bixiyeen masuuliyiin sar sare oo ka tirsan dawlada.
Xadhiga masuuliyiintan ayaa markii la xaqiiyey la sheegay in uu xadhigooda lugwayn uu ku leeyahay Cismaan Buurmadaw kadib markii idaacadii xalay uu Cismaan Sayid waraysi la yeeshay nin ay xigto yihiin Buurmadaw oo sheegay in aanuu beel ahaan Buurmadaw matalin Boqornimadiina ay ka qaadeen shir ay dabayaaqadii sanadkii tagay ay beeshu yeelatay.
Xadhigan xubnahan masuuliyiiinta oo iminka ku xidhan saldhiga dhexe ee magalda Hargaysa ah ayaa aan ahayn mid ku cusub xukuumadan mudadeedii dhacay taas oo kuwan qaar ka horeyeyba lagula kacay taas oo xadhiga suxufiyaanta u adeegsato hab ka soo horjeeda dastuurka iyo xuquuqda saxaaafada.
Hase yeeshee, mar wax laga waydiiyey arrintan taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland Col Maxamed Saqadhi Dubad ayaa sheegay inaanu ka war heyn xadhigaas haba yaraate.